Blogs | Inya Economics | Page 2
YOUTH’S SOCIAL MEDIA USAGE, Economic Hardship & Mental Health Conditions During Five Months of Military Coup
Myanmar Version ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ် – အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း (၅)လတာ ကာလအတွင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများ သုံးစွဲမှု၊ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နာကျင်မှု အခြေအနေများ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသည့် ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး Read More...
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုများ
မေ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေ လွတ်ကင်းအောင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတည်းက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ရှေ့ရှု့ခဲ့ကြတယ်၊ စျေးကွက်စီးပွားရေး (စကားလုံးများနှင့် ဝါဒဖြန့်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ) Read More...
Inya Economics Newsletter No.1 May 2021
ပြည်သူတွေ ဘာလုပ်ကြမလဲ? မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တိုင်း လူတန်းစားအလွှာ (၃)ခုဖြစ်တဲ့ ချမ်းသာတဲ့ လူတန်းစား၊ လူလတ်တန်းစားနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားရဲ့ တုန့်ပြန်ပုံတွေဟာ အစဉ်အလာအတိုင်း တူညီလေ့ရှိပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလအထိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ အဘက်ဘက်ကနေ Read More...
၂၀၂၁ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဟောစာတမ်း
ဟောစာတမ်းဟုသာဆိုရသည်၊ ဟောစရာမလိုလောက်အောင် မြန်မာ့စီးပွားရေး မည်သည့်အခြေအနေ ရောက်နေသည်မှာ မြင်သာလွန်းသည်။ သို့သော် ဘယ်လောက်ထိ အလွတ်ကျ ကျသွားသည်ကို မတ္တာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဖော်ပြရန်လိုသည်။ သို့မှသာ လာမည့် “၆မူး ပဲလျော့” ကာလအတွင်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်မည်။ အခါသင့်လျှင် Read More...
နည်းပညာ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် အစိုးရဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု
“နည်းပညာတိုးတက်မှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို တိုးပွားစေသည်။” တစ်နည်း “နည်းပညာတိုးတက်မှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအား ပိုမိုကြွယ်ဝချမ်းသာစေသည်။” နည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့် ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်း တိုးတက်လာသည်။ အရင်က သုံးစွဲသည့် ကုန်ကြမ်းပမာဏအား နည်းပညာသစ် Read More...
Hunger Crisis under Double Damage in Myanmar
Post On October 6, 2021
The study of challenges and opportunities of SMEs after coup
Post On August 19, 2021
Teaching and Learning Progress of Free, Basic Educational Organizations after the Military Coup
Post On August 9, 2021
Cryptocurrency and its Future in Myanmar
Post On August 6, 2021
Political Repercussion on COVID-19 Elimination in Myanmar
Post On August 5, 2021